2007 Kawasaki Z ကို 750 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → Kawasaki → 2007 Kawasaki Z ကို 750 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
20 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments on 2007 Kawasaki Z ကို 750 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Complementing the Z750’s new chassis isare-tuned power unit. အဆိုပါအရည်-အအေး, 748 cm3, 16-အခင်အရှင်, In-line Four has more instant urge and overtaking power just what’s needed to excel in today’s urban riding environment. Changes result inawider mid-range torque curve whilst retaining the high-rpm exhilaration of the previous model.
Kawasaki Recalls 2008-2009 KLR 650 မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ATV ရင်းမြစ် – Manufacturers – Kawasaki – 2003 – Bayou 250
Kawasaki ZX10R Ninja 2014 ဆန်းစစ်ခြင်း – The ZX10R Just Got Better!
Kawasaki ER-6f Road Test How To Make & အရာအားလုံးလုပ်ပါ!
Kawasaki Z ကို 750
20.06.2015 | ဟာ Off comments on Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – ခုနှစ်တွင် ...
20.06.2015 | ဟာ Off comments on 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
20.06.2015 | ဟာ Off comments on 2010 Kawasaki လားနှင့် Teryx lineup ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
20.06.2015 | ဟာ Off comments on Kawasaki: Kawasaki နှင့်အတူ 1000 kavasaki z 400
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2008 Kawasaki Concours 14 အားကစား Tour မော်တော်ဆိုင်ကယ် – အဆိုပါအပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း…
19.06.2015 | ဟာ Off comments on Kawasaki Vulcan 1500 Drifter : wiki (အဆိုပါအပြည့်အဝဝီကီ)
18.06.2015 | ဟာ Off comments on အဆိုပါ Kawasaki Ninja ZX-6R eHow အတွက်လောင်စာဆီ Pump စုံစမ်းလုပ်နည်း
18.06.2015 | ဟာ Off comments on 1998 Kawasaki zx-7R * HEAD Turner * ZX7
Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Ducati Desmosedici GP11 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Bajaj Discover Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Diavel ဆူဇူကီး Colleda CO Brammo Enertia ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စမတ် eScooter KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati 60 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စက်ဘီး Kawasaki ER-6n